အာဋာနာဋိယသုတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာဋာနာဋိယသုတ် သည် ဒီဃနိကာယ်၏ (၃၂) ခုမြောက်သုတ်ဖြစ်၍ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ ဟောကြားခဲ့သည်။ ဤသုတ်သည် ဘုရားမြတ်စွာကို မကြည်ညိုမမြတ်နိုးသော နတ်များ၊ ဂန္ဓဗ္ဗများ၊ ယက္ခများသည် ဘုရားမြတ်စွာ၏ ဥပါသကာနှင့် ဥပါသိကာတို့အား အနှောင့်အယှက်ပေးခဲ့သော် မည်သို့မည်ပုံ ချွတ်လွှဲရမည့်အကြောင်း ညွှန်ပြသောသုတ်ဖြစ်သည်။
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါက သာသနာတော်ကို မသက်ဝင် မယုံကြည်ကြသော၊ သီလစောင့်သူများ၏ ဘုန်းကံကို မခံနိုင်သော ဘီလူး မိစ္ဆာများက သာသနာ့အနွယ်ဝင် ပရိသတ်လေးပါးဖြစ်သော ရဟန်း၊ ရဟန်းအမ၊ သာသနာ့ ဒါယကာ၊ သာသနာ့ ဒါယိကာမတို့ကို ဖမ်းဆီးနှောင့်ယှက်ကြလေသည်။ ထို မိစ္ဆာဘီလူးများ ယဉ်ကျေးလာပြီး သာသနာတော်တွင် သက်ဝင်ယုံကြည်လာစေရန် အာဋာနာဋိယသုတ် ရွတ်ဆိုစေသည်။
၂ အာဋာနာဋိယသုတ် ပါဠိတော်
၃ အာဋာနာဋိယသုတ် မြန်မာပြန်
အာဋာနာဋိယသုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည် အာဋာနာဋ ဟုခေါ်ဆိုသေု နတ်မြို့တော်၌ စုရုံးစည်းဝေးကြကာ ဝိပဿီဘုရားမှစ၍ ဂေါတမဘုရားအထိ ခုနှစ်ဆူသော ဗုဒ္ဓများ၏ ဂုဏ်တော်ကို အာရုံပြု၍ ရှိခိုးပြီး အာဋာနာဋိယသုတ်ကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက်မှ ဘုရားရှင်၏ ဓမ္မစက်၊ ၎င်းတို့၏ အာဏာစက်ကို မခံယူကြသော နတ်ဆိုးများကို ဤသို့ ဤသို့သော နတ်ပြစ်ဒဏ်များခတ်မည် ဆိုကြသည်။ ထိုသို့ဆိုကြပြီးနောက်မှသာ လူ့ပြည်ရှိ ဂေါတမဗုဒ္ဓရှိရာသို့ များပြားသော နတ်စစ်သည်ဗိုလ်ပါများနှင့်အတူ သွားခဲ့ကြသည်။
စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီးလေးပါးသည် လေးဘက်လေးလံရှိ မြို့တံခါးအတွင်း၊ အပြင်၊ အနီးတို့တွင် ၎င်းတို့၏တပ်များကို အစောင့်ချထားကြ၍ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသော ဂေါတမဗုဒ္ဓရှိရာသို့ ရောက်လာကြသည်။ ဘုရားရှင်ကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် အခြားသော ယက္ခများနှင့်အတူထိုင်ကြသည်။ ဝေဿဝဏ်နတ်မင်းခေါ် ကုဝေရနတ်မင်းက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ဤသို့ဆိုလေသည်။
"အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားအား မကြည်ညိုသော တန်ခိုးကြီးသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏၊ အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားအား ကြည်ညိုသော တန်ခိုးကြီးသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏၊ အသျှင် ဘုရား မြတ်စွာဘုရားအား မကြည်ညိုသော တန်ခိုးအလတ်စားရှိသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏၊ အသျှင် ဘုရား မြတ်စွာဘုရားအား ကြည်ညိုသော တန်ခိုးအလတ်စားရှိသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏၊ အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားအား မကြည်ညိုသော တန်ခိုးအနိမ့်စားရှိသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏၊ အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားအား ကြည်ညိုသော တန်ခိုးအနိမ့်စားရှိသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏။ အသျှင်ဘုရား များသောအားဖြင့် ဘီလူးတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား မကြည်ညိုကြပါကုန်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြတ်စွာဘုရားသည် အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းငှါ တရားကို ဟောတော်မူ၏။ မပေးသော ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းငှါ တရားကို ဟောတော်မူ၏။ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားသောအားဖြင့် ကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းငှါ တရားကို ဟောတော်မူ၏။ မဟုတ်မမှန်သော စကားကို ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းငှါ တရားကို ဟောတော်မူ၏။ မူးယစ်မေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်ကို သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းငှါ တရားကို ဟော တော်မူ၏။ အသျှင်ဘုရား ဘီလူးတို့သည် များသောအားဖြင့် အသက်သတ်ခြင်းမှ မရှောင်ကြဉ်ကြကုန်၊ မပေးသော ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ မရှောင်ကြဉ်ကြကုန်၊ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားသောအားဖြင့် ကျင့်ခြင်းမှ မရှောင် ကြဉ်ကြကုန်၊ မဟုတ်မမှန်သော စကားကိုပြောခြင်းမှ မရှောင်ကြဉ်ကြကုန်၊ မူးယစ်မေ့လျော့ကြောင်း ဖြစ်သော သေအရက်ကို သောက်ခြင်းမှ မရှောင်ကြဉ်ကြကုန်၊ ထိုနတ်ဘီလူးတို့သည် ထိုတရားတော်ကို မနှစ် သက် မမြတ်နိုးကြပါ။
အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်တို့သည် အသံနည်းကုန်သော ပြည်ရွာတွန်သံ မရှိကုန်သော လူတို့၏ အငွေ့အသက် ကင်းကုန်သော လူတို့၏ လျှို့ဝှက်သော အမှုကို ပြုခြင်းငှါ ထိုက်ကုန်သော ကိန်း အောင်း၍ နေခြင်းငှါ လျောက်ပတ်ကုန်သော ဝေးကွာသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲနေထိုင်ပါကုန်၏။ ထို ကျောင်းတို့၌ နေသော တန်ခိုးကြီးသော ဘီလူးတို့သည် ရှိပါကုန်၏။ အကြင်ဘီလူးတို့သည် မြတ်စွာ ဘုရား၏ သာသနာတော်၌ မကြည်ညိုကုန်၊ ထိုဘီလူးတို့ကို ကြည်ညိုစေရန် မြတ်စွာဘုရားသည် အာဋာနာဋိယမည်သော ပရိတ်အရံအတားကို ရဟန်းယောကျ်ား ရဟန်းမိန်းမ ဥပါသကာယောကျာ်း ဥပါသိကာ မိန်းမတို့၏ အကာအကွယ် အစောင့်အရှောက် ဖြစ်ခြင်းငှါ သင်ပေးတော်မူပါလော့ဟု (လျှောက်၏)။
ထို့နောက် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်က ထိုနတ်မင်းကြီးလေးပါး၏ ပြောဆိုမှု (တရားမန္တန်) ကို ရဟန်းတို့အား ပြန်လည်ဟောပြောပြသည်။
ဤသုတ်၏ နိဒါန်း၌ ဘုရားရှင် ခုနှစ်ဆူတို့၏ ဂုဏ်တော်များကို ရွတ်ဆိုပူဇော်ရှစ်ခိုးမှုများပါဝင်၍ နတ်မင်းကြီးလေးပါး၏ ဂုဏ်အင်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် နတ်စစ်သည် (၄၁) ပါးတို့၏ အမည်များကိုလည်း ဖော်ပြထားသေး၏ ။
၁။ အပ္ပသန္နေဟိ နာထဿ၊ သာသနေ သာဓုသမ္မတေ။ အမနုဿေဟိ စဏ္ဍေဟိ၊ သဒါ ကိဗ္ဗိသ ကာရိဘိ။
၂။ ပရိသာနံ စတဿန္နံ၊ အဟိံ သာယ စ ဂုတ္တိယာ။ ယံ ဒေသေသိ မဟာဝီရော၊ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ဟေ။
၃။ ဝိပဿိဿ စ နမတ္ထု၊ စက္ခုမန္တဿ သိရီမတော။ သိခိဿပိ စ နမတ္ထု၊ သဗ္ဗဘူတာ နုကမ္ပိနော။
၄။ ဝေဿဘုဿ စ နမတ္ထု၊ နှာတကဿ တပဿိနော။ နမတ္ထု ကကုသန္ဓဿ၊ မာရသေနာ ပမဒ္ဒိနော။
၅။ ကောဏာဂမနဿ နမတ္ထု။ ဗြာဟ္မဏဿ ဝုသီမတော။ ကဿပဿ စနမတ္ထု၊ ဝိပ္ပမုတ္တဿ သဗ္ဗဓိ။
၆။ အင်္ဂီရသဿ နမတ္ထု၊ သကျပုတ္တဿ သိရီမတော။ ယော ဣမံ ဓမ္မံ ဒေသေသိ၊ သဗ္ဗဒုက္ခာပနူဒနံ။
၇။ ယေ စာပိ နိဗ္ဗုတာ လောကေ၊ ယထာဘူတံ ဝိပဿိသုံ။ တေ ဇနာ အပိသုဏာ ထ၊ မဟန္တာ ဝီတသာရဒါ။
၈။ ဟိတံ ဒေဝနုဿာနံ၊ ယံ နမဿန္တိ ဂေါတမံ။ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နံ၊ မဟန္တံ ဝီတသာရဒံ။
၉။ ဧတေ စညေ စ သမ္ဗုဒ္ဓါ၊ အနေကသတကောဋိယော။ သဗ္ဗေ ဗုဒ္ဓါ သမသမာ၊ သဗ္ဗေ ဗုဒ္ဓါ မဟိဒ္ဓိကာ။
၁၀။ သဗ္ဗေ ဒသဗလူပေတာ ဝေသာရဇ္ဇေဟု ပါဂတာ။ သဗ္ဗေ တေ ပဋိဇာနန္တိ၊ အာသဘံ ဌာန မုတ္တမံ။
၁၁။ သီဟနာဒံ နဒန္တေ တေ၊ ပရိသာသု ဝိသာရဒါ။ ဗြာဟ္မစက္ကံ ပဝတ္တန္တိ၊ လောကေ အပ္ပဋိဝတ္တိယံ။
၁၂။ ဥပေတာ ဗုဒ္ဓဓမ္မေဟိ၊ အဋ္ဌာရသဟိ နာယကာ။ ဗာတ္တိံသ လက္ခဏူပေတာ၊ သီတာနုဗျဉ္ဇနာ ဓရာ။
၁၃။ ဗျာမပ္ပဘာယ သုပ္ပဘာ၊ သဗ္ဗေ တေ မုနိကုဉ္ဇရာ။ ဗုဒ္ဓါ သဗ္ဗညုနော ဧတေ၊ သဗ္ဗေ ခီဏာသဝါ ဇိနာ။
၁၄။ မဟာပဘာ မဟာတေဇာ၊ မဟာပညာ မဟဗ္ဗလာ။ မဟာကာရုဏိကာ ဓီရာ၊ သဗ္ဗေသာနံ သုခါဝဟာ။
၁၅။ဒီပါ နာထာ ပတိဋ္ဌာ စ၊ တာဏာ လေဏာ စ ပဏိနံ။ ဂတီ ဗန္ဓူ မဟေဿာသာ၊ သရဏာ စ ဟိတေသိနော
၁၆။ သဒေဝကဿ လောကဿ သဗ္ဗေ ဧတေ ပရာယဏာ။ တေသာ ဟံ သိရသာ ပါဒေ၊ ဝန္ဒာမိ ပုရိသုတ္တမေ။
၁၇။ ဝစသာ မနသာ စေဝ၊ ဝန္ဒာမေ တေ တထာဂတေ။ သယနေ အာသနေ ဌာနေ၊ ဂမနေ စာပိ သဗ္ဗဒါ။
၁၈။ သဒါ သုခေန ရက္ကန္တု၊ ဗုဒ္ဓါ သန္တိကရာ တုဝံ။ တေဟိ တွံ ရက္ခိတော သန္တော။ မုတ္တော သဗ္ဗဘယေဟိ စ။
၁၉။ သဗ္ဗရောဂါ ဝိနီမုတ္တော၊ သဗ္ဗသန္တာပ ဝဇ္ဇိတော။ သဗ္ဗဝေရ မတိက္ကန္တော၊ နိဗ္ဗုတော စ တုဝံ ဘဝ။
၂၀။တေသံ သစ္စေန သီလေန၊ ခန္တိမေတ္တာ ဗလေန စ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၁။ ပုရတ္ထိမသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ ဘူတာ မဟိဒ္ဓိကာ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၂။ ဒက္ခိဏသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ ဒေဝါ မဟိဒ္ဓိကာ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၃။ ပစ္ဆိမသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၄။ ဥတ္တရသ္မိံ ဒိသာဘာဂေ၊ သန္တိ ယက္ခာ မဟိဒ္ဓိကာ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၅။ ပုရတ္ထိမေန ဓတရဋ္ဌော၊ ဒက္ခိဏေန ဝိရူဠှကော။ ပစ္ဆိမေန ဝိရူပက္ခော၊ ကုဝေရော ဥတ္တရံ ဒိသံ။
၂၆။ စတ္တောရော တေ မဟာရာဇာ၊ လောကပါလာ ယသဿိနော။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၇။ အာကာသဋ္ဌာ စ ဘူမဋ္ဌာ၊ ဒေဝါ နာဂါ မဟိဒ္ဓိကာ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၈။ ဣဒ္ဓိမန္တော စ ယေ ဒေဝါ၊ ဝသန္တာ ဣဓ သာသနေ။ တေပိ အမှေ နုရက္ခန္တု၊ အရောဂေန သုခေန စ။
၂၉။ သဗ္ဗီတိယော ဝိဝဇ္ဇန္တု၊ သောကော ရောဂေါ ဝိနဿတု။ မာ တေ ဘဝန္တန္တရာယာ၊ သုခီ ဒီဃာယုကော ဘဝ။
၃၀။ အဘိဝါဒန သီလိဿ၊ နိစ္စံ ဝုဍ္ဎာပစာယိနော။ စတ္တာရော ဓမ္မာ ဝဍ္ဎန္တိ၊ အာယု ဝဏ္ဏော သုခံ ဗလံ။
၁. သူတော်ကောင်းအပေါင်းက ကောင်းပါပေသည်ဟု လက်ခံချီးကျူးထားသော မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုပင် မကြည်ညိုမသက်ဝင်နိုင်ကြသော လူကြမ်း ဘီလူးတို့သည် ရက်စက်တတ်ကြကုန်၏။ မည်သည့်အခါမဆို နိုင်ထက်စီးနင်း နှိပ်စက်ကလူ ပြုတတ်ကြ၏။
၂. ထိုဘီလူး လူကြမ်းတို့က ပရိတ်သတ်ကို မညှင်းဆဲ မနှိပ်စက်နိုင်စေရန်နှင့် သူတို့ကပင် ကူညီစောင့်ရှောက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြီးမြတ်သောလုံ့လရှိတော်မူသော် မြတ်စွာဘုရားက ဤအာဋာနိဋိယ ပရိတ်တော်အရံအတားကို ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ယခုအခါ၌ ဤပရိတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုပေါင်း၍ ရွတ်ဆိုကြပါကုန်စို့။
၃. စက္ခု ငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ဘုန်းကျက်သရေနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားအား အကျွန်ုပ်၏ဦးညွှတ်ရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါစေ။ သတ္တဝါ အားလုံးအပေါ် ကြင်နာသနားမှုဖြင့် အစဉ်သနား စောင့်ရှောက်တော်မူသော သိခီမြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ်၏ ဦးညွှတ်ရှိခိုးမှုဖြစ်ပါစေ။
၄. မကောင်းမှု အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးဖြစ်သော ခြိုးခြံသော အကျင့်ကိုလည်း ကျင့်တော်မူသော ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏။ မာရ်စစ်သည် အပေါင်းကို နှိမ်နှင်းအောင်မြင်တော်မူသော ကကုသန်မြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ် ရှိခိုးပါ၏။
၅. မကောင်းမှု ဟူသမျှအပ်ပြုပြီးသော ငါးပါးသောဝသီဘော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ကောဏာဂုံမြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏။ ခပ်သိမ်းသောကိလေသာတို့မှ လွတ်ကင်းတော်မူပြီးသော ကဿပမြတ်စွာဘုရားအားလည်း အကျွန်ုပ်၏ ဦးညွှတ် ရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါစေ။
၆. လူတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှကို ပယ်ဖျောက်နိုင်စွမ်းရှိသော တရားတော်မြတ်ကို ဟောကြားတော်မူပေ၏။ ကိုယ်တော်မှလည်း အရောင်အဝါကွန့်မြူးဖြာယှက် ထွက်တော်မူ၏။ ဘုန်းကျက်သရေနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။ သကျသာကီဝင်မင်းသားလည်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအား အကျွန်ုပ်၏ ဦးညွှတ်ရှိခိုးခြင်းသည် ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၇. လောက၌ ငြိမ်းအေးကုန်ပြီးသော ဘုရားရှင်အဆူဆူတို့သည် ယထာဘူတကျကျသိကုန်၏။ ချောပစ်ကုန်းတိုက်သော စကားမျိုးကို မည်သည့်အခါမျှ ဆိုမိန့်တော်မမူ၊ ကြီးလည်းကြီးမြတ်ကုန်၏။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်း ကင်းကုန်၏။
၈. ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ ဝိဇ္ဇာရှစ်ပါး၊ စရဏတဆယ့်ငါးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၍ မြတ်လှစွာသော ရဲရင့်ခြင်းအတိ ရှိတော်မူသော နတ်လူတို့၏ အစီးအပွားကိုဆောင်တော်မူတတ်သော ဂေါတမနွယ်ဖွား ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကို ရှိခိုးဦးညွှတ်ကြပါကုန်၏။
၉. ဝိပဿီ၊ သိခီ၊ ဝေဿဘူ ၊ ကကုသန်၊ ကောဏာဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ ဟူသော ဘုရားခုနှစ်ဆူတို့နှင့်တကွ အကုဋေမကများလှစွာသော ဘုရားရှင်အားလုံးတို့သည် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါရဟန္တာများနှင့် တူတော်မမူကုန်။ ဆိုခဲ့ပါ သဗ္ဗညူ ဘုရားရှင်ချင်းသာ တူတော်မူကြကုန်၏။ ဘုရားရှင်အားလုံးပင် တန်ခိုးဣဒ္ဓိ လွန်စွာကြီးမားကြကုန်၏။
၁ဝ. ခပ်သိမ်းကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည် အားတော်ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူ၏။ ရဲရင့်သော ဝေသာရဇ္ဇဉာဏ်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။ မြတ်သောယောကျ်ား ဥသဘဖြစ်တော်မူ၍ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ရရှိကြောင်း ဝန်ခံကြကုန်၏။
၁၁. ဘုရားရှင်တို့သည် မည်သည့် ပရိတ်သတ်ဗိုလ်ပုံအလယ်၌ လွန်စွာရဲရင့်တော်မူကြ၏။ ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့ ရဲရဲရင့်ရင့်စကားဆိုကြ၏။ မည်သူ တဦးတယောက်မျှ မလည်မပတ်စေနိုင်သော ဓမ္မစကြာတရားတော် ကိုလည်း လည်ပတ်စေကုန်၏။ (ဟောကြားကုန်၏။)
၁၂. ဘုရားရှင်တို့သည် လူသုံးပါးတို့၏ ခရီးလမ်းညွှန် ဖြစ်ကြ၏။ ဘုရား၏ကျေးဇူးတရား (၁၈) ပါးနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်၏။ (၃၂) ပါးသော ယောကျ်ားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်ကြီးတို့နှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။ လက္ခဏာတော်ငယ် (၈ဝ) တို့နှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူကြ၏။
၁၃. ဘုရားရှင်ဟူသမျှ ကိုယ်တော်အလုံးမျှ တလံမျှလောက်ရောင်ခြည်တော် အမြဲထွက်လျက်ရှိ၏။ ရဟန်းဟူသမျှတို့ထက် ကြီးမြတ်၏။ ခပ်သိမ်းသောတရားကိုလည်း သိ၏။ ကိလေသာအာသဝေါလည်း ကင်း၏။ မာရ်ငါးပါးကိုလည်း အောင်ပြီးဖြစ်၏။
၁၄. ဘုရားရှင်တို့သည် များစွာသော ရောင်ခြည်တော်၊ ကြီးသောတန်ခိုး၊ ထွတ်မြတ်သောပညာ၊ စွမ်းသန်သော ခွန်အား၊ အတိုင်းမသိသော ကရုဏာ၊ စွဲမြဲသောလုံ့လတို့ကို ပိုင်တော်မူကြ၏။ သတ္တဝါအများကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်း ဆောင်တော်မူတတ်ကြကုန်၏။
၁၅. မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည် သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ မှီခိုရာကျွန်းလည်း ဖြစ်၏။ ကိုးကွယ်ရာလည်းဖြစ်၏။ တည်ရာလည်းဖြစ်၏။ စောင့်ရှောက်ရာလည်းဖြစ်၏။ ဘေးအန္တရာယ်မှ ပုန်းကွယ်ရာလည်းဖြစ်၏။ လာရောက်ရာလည်း ဖြစ်၏။ ဆွေမျိုးသဖွယ်လည်းဖြစ်၏။
၁၆. ထိုဘုရားရှင်တိုင်းသည် နတ်တို့၏ လဲလျောင်းရာ၊ လူတို့၏ မှီခိုရာ ဖြစ်ကြကုန်၏။ အကျွန်ုပ်သည် ယောကျ်ားဟူသမျှတို့ထက် သာလွန်မြင့်မြတ်တော်မူသော ထိုဘုရားရှင်တို့၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးနှိမ် ရိုကျိုး ရှိခိုးပါ၏။
၁၇. အကျွန်ုပ်သည် အိပ်နေသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ ထိုင်နေသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ ရပ်နေသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ လမ်းသွားနေသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အခါ၌မဆို ထိုဘုရားရှင်တို့အား နှုတ်ဖြင့်၎င်း စိတ်ဖြင့်၎င်အမြဲမပြတ် ရှိခိုးပါ၏။
၁၈. ကိလေသာအပူအပေါင်းကိုငြိမ်းအေးအောင် ပြုတော်မူတတ်ကြကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည် သင့်ကို ချမ်းသာအောင် မပြတ်စောင့်ရှောက်ပါစေသတည်း။ ဘုရားရှင်တို့၏ အစောင့်အရှောက်ကိုခံယူရသော သင်သည် ငြိမ်သက်ချမ်းမြေ့ပါစေ။ ဘေးအန္တရာယ်ခပ်သိမ်းမှ ကင်းလွတ်ပါစေ။
၁၉. သင်သည် အနာမရှိ ပကတိကျန်းမာသူ၊ ပူပန်ခြင်း ကင်းသူ၊ ရန်သူဟူသမျှကို လွတ်မြောက်နိုင်သူ၊ ငြိမ်းအေးချမ်းမြေသူ ဖြစ်ပါစေသတည်း။
၂ဝ. ထိုဘုရားရှင်တို့သည် သီလ၊ သစ္စာ၊ ခန္တီ၊ မေတ္တာတို့၏ စွမ်းပကားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်သဖြင့်စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၁. အရှေ့မျက်နှာအရပ်၌ တန်ခိုးကြီးသော ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့ ရှိကြကုန်၏။ ထိုနတ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်တစိုက်စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၂. တောင်ဘက်အရပ်မျက်နှာ၌ တန်ခိုးကြီးသော ကုမ္ဘဏ်နတ်တို့ ရှိကြကုန်၏။ ထိုနတ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်သဖြင့် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၃. အနောက်အရပ်မျက်နှာ၌ တန်ခိုးကြီးသော နဂါးတို့ရှိကြကုန်၏။ ထိုနဂါးတို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၄. မြောက်ဘက်အရပ်မျက်နှာ၌ တန်ခိုးကြီးသောဘီလူးတို့သည် ရှိကြကုန်၏။ ထိုဘီလူးတို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို အစဉ်သဖြင့် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၅. အရှေ့အရပ်မျက်နှာ၌ ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့ကို အစိုးရသော ဓတရဋ္ဌနတ်မင်း၊ တောင်အရပ်မျက်နှာ၌ ကုမ္ဘဏ်တို့ကို အစိုးရသောဝိရူဠကနတ်မင်း၊ အနောက်အရပ်မျက်နှာ၌ နဂါးတို့ကိုအစိုးရသော ဝိရူပက္ခ နတ်မင်း၊ မြောက်အရပ်မျက်နှာ၌ ဘီလူးတို့ကို အစိုးရသော ကုဝေရနတ်မင်း။
၂၆. ထိုနတ်မင်းကြီးလေးပါးတို့သည် လူတို့ကို စောင့်ရှောက်တတ်ကြကုန်၏။ အခြွေအရံလည်းများကုန်၏။ ထိုနတ်မင်းကြီးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်မပြတ် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၇. ကောင်းကင်၌တည်သော နတ်များ၊ မြေ၌တည်သော နတ်များ၊ နဂါးများသည် တန်ခိုးအလွန်ကြီးကြသည်။ ထိုတန်ခိုးကြီးနတ်၊ နဂါးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်မပြတ် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၈. တန်ခိုးကြီးသောနတ်တို့သည် ဤဘုရားသာသနာတော်၌ နေကြကုန်၏။ ထိုသာသနာစောင့်နတ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အနာမရှိ ပကတိချမ်းသာအောင် အစဉ်မပြတ် စောင့်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။
၂၉. ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းစေကုန်သတည်း။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ ကင်းစေကုန်သတည်း။ အနာရောဂါဟူသမျှ ပျောက်စေကုန်သတည်း။ သင့်အား အန္တရာယ် တစုံတရာမဖြစ်စေသတည်း။ ချမ်းချမ်းသာသာနှင့် အသက်ရှည်စွာ နေရပါစေသတည်း။
၃ဝ. ရတနာမြတ်သုံးပါးအား ရိုသေစွာ ရှိခိုးဆည်းကပ်လေ့ရှိသောသူ၊ သီလရှိသူ၊ သမာဓိရှိသူ၊ ပညာရှိသူတို့ကို အမြဲမပြတ်ရိုသေလေးစားတတ်သူသည် အသက်ရှည်၏။ အဆင်းလှ၏၊ ချမ်းသာကြီးပွါး၏။ ခွန်အားဗလ တိုးတက်လေ၏။ အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာကြီးခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်းဟူသော ဤကျေးဇူးတရားတို့သည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ ထာဝစဉ် တိုးတက်လျက်သာနေကြကုန်သတည်း။
↑ Walshe၊ Maurice (1995)။ The Long Discourses of the Buddha: A Translation of the Digha Nikaya။ Wisdom Publications။ pp. 471–478။
↑ Atanatiya Sutta: Discourse on Atanatiya။ Buddhist Publication Society (1999)။
↑ တိပိဋကဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တဿရာဘိဝံသ (၁၉၉၇)။ နိုင်ငံတော် သာသန မဟာဗုဒ္ဓဝင် (တတိယတွဲ)၊ သတ္တမအကြိမ်။ သာသနာရေးဦးစီးဌာန။ p. ၃၁၇။
↑ Atanatiya-sutta, Ātānātiya-sutta, Āṭānāṭiya-sutta: 1 definition (12 September, 2019)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဋာနာဋိယသုတ်&oldid=657145" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၂၁၊ ၂၃:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။